नेपाल भारतवीचका असमान सन्धि के गर्ने ? दुबै मुलुकवीच कसरी सहज र सम्मानित सम्बन्ध कायम गर्ने उपाय पत्ता लगाएर सुझाव दिन इपिजी अर्थात विज्ञ समूह गठन गरिएको हो । तर यो समूहका नेपाली प्रतिनिधिहरु डा.भेषबहादुर थापा, निलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय, राजन भट्टाराईहरु खाली भारत सकारात्मक रहेको कुरा बताइरहेका छन् । नेपाल भारतवीचको सन् १९५० को सन्धी परिमार्जन गर्न भारत तयार भएको हो कि होइन ? अरु के के सहमति भएका छन् ? यसबारेमा समेत उनीहरु जिब्रो चपाएर कुरा गर्छन् ।
अव सातौं बैठक हुँदैछ, अहिलेसम्मका बैठकले के गर्‍यो, सुसमाचार नेपालीले पाएकै छैनन् । नेपाली पक्षले मस्यौदा गर्ने जिम्मा पाएको भनिएको छ, कुन कुन विषयको मस्यौदा तैयार गरिदैछ र यसमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुको सुझाव लिन यिनलाई किन गाह्रो परिरहेको छ, बुझिन्न ।
भन्नलाई नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाना पनि यही अवस्थामा राख्नु हुँदैन भन्नेमा सहमति भएको भनिन्छ । भएको भए राम्रो कुरा हो । के गर्ने त ? खोई मोडालिटी ? अव फागुन १२ र १३ गते काठमाडौंमा बैठक बस्दैछ, त्यो बैठकमा नेपालले प्रस्ताव गर्ने विषय पारदर्शी नगरेर किन गोप्य राखिदैछ ?
भारतका संयोजक भगतसिंह कोसियारी, जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी लामा र बिसी उप्रेतीले मुख खोलेका छैनन् । सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार तथा पारबहन, सीमा व्यवस्थापन, दशगजाको व्यवस्थापन, विवादित भूमिका बिषयमा पनि छलफल भएको छ भनिन्छ । हरेक दिन सीममा नेपाली लुटिएको, मारिएको र तिनको सतित्व लुटिने विषयमा नेपालीले किन कुरा राखेनन् ?
सुषमा स्वराज आएर गइन्, मोदी र ओलीवीचको शिखर वार्ता हुनेवाला छ, यस अगावै विज्ञ समूहले एउटा टुंगो गर्न सके आगामी असार २१ मा सकिने यो समूहको उपादेयता नेपालको पक्षमा हुनेथियो । विज्ञ समूह भारतवादी हो कि नेपालवादी ? यिनको ल्याकत र नेपालीत्वको परीक्षाको घडी हो यो ।